DOWNLOAD Dassault Mirage 5 de 5 maoderina Package FS2004 - Rikoooo
Downloads 17 093
Author: Models, panel, textures, gauges, Eduardo Fadul xml effects Rob Barendregt HUD Scott Printz. Radar, Eric Marciano
Ny Mirage 5 dia mpiady frantsay tsara indrindra fantatra eto amin'izao tontolo izao. Eto ny tena fonosana ny vaovao Mirage (ganagana, Refueling hanadihady). Modely rehetra dia manana ny fihetsik'ireo sary mihetsika toy ny mikopaka, mpandrava, cockpit, etc ..
Ny VC dia toy akaiky araka izay azo atao ny Mirage 5COAM. Photorealism, tontonana, gauges, fanairana tontonana, Radar, Houd, clickable VC, tena feo avy amin'ny Ata SNECMA tena isan-karazany vokatry.
Izany entana tonga miaraka 14 modely tany am-boalohany, ary koa ny Mirage 5M (maoderina), miaraka amin'ny Mk-82 baomba, sy Python III Aam Griffon, etc .., ary koa textures telo sy sasany ny Kolombiana Air Force.